Waa kuwee Madaalayaasha Premier Leauge???…(EEG LIISKA) – Gool FM
Waa kuwee Madaalayaasha Premier Leauge???…(EEG LIISKA)
Byare October 29, 2016
(England) 29 Oktoobar 2016. Marka laga soo tago in koox kastaa u baahan tahay weeraryahan si joogta ah goolal ugu dhaliya si ay guulal u gaarto misane waxaa lagama maarmaan ah inay sidoo kale kooxdu hesho madaale howl dheeri ah u qabta.
Waxaa xusid mudan howlihii hagar la’aanta ay kooxahooda u qaban jireen rugcadaayadii Man United iyo Arsenal Keane iyo Vieira.
Haddaba Mirror ayaa soo saartay madaalayaasha Premier League ilaa iminka kulamadii la soo ciyaaray isla markaana shaqadii ugu adkeyd u qabtay kooxahooda.
Kubbad bur-buriyaha Chelsea ee Kante ayaa durba maskaxdaada ku soo dhacaya marka aad maqasho madaale shaqo adag qabta balse ogoow kulamada ilaa iminka la soo ciyaaray waxaa ka sita oo kaalinta koowaad ku jira kabtanka Liverpool Jordan Henderson sida ay Opta ku sheegtay qiimeynta ay sameysay.
Xiddigahan howsha adag qabtay ayaa jaray ama daboolay masaafada ugu badan garoonka.
Masaafaduu jaray: 99.21km
Masaafaduu jaray: 99.46km
Masaafaduu jaray: 99.62km
Masaafaduu jaray: 99.70km
Masaafaduu jaray: 100.48km
5. Sam Clucas
Masaafaduu jaray: 100.67km
Masaafaduu jaray: 102.04km
Masaafaduu jaray: 104.06km
Masaafaduu jaray: 104.95km
Masaafaduu jaray: 106.49km
Chelsea oo Janaayo u dhaqaaqeysa Javier Pastore
Robert Lewandowski oo ku dhow inuu heshiis cusub u saxiixo Bayern Munich